Iindaba - Uyikhetha njani ibhegi yeduffle?
Uyikhetha njani ibhegi yeduffle?
Ibhegi yokuhamba yeduffel ephathekayo yenziwe yipolyester kunye nenayiloni, kwaye ikwavumelekile ukuyila kuzo zonke iimilo kunye nemibala. Ngapha koko, ibhegi ye-duffel iya isiba nzima ngakumbi kubafazi nakwindoda. Ingxowa ye-duffel inokugcina phantse yonke into njengempahla, izihlangu, iinwele kunye neendevu, iincwadi, iibhola kunye nezinye izinto. Umbuzo ngowokuba ungayikhetha njani ibhegi enye eyeyakho. Emntwini, bafuna ibhegi entle, eyindoda, esebenzayo, eguqukayo kunye neyangoku. Sikucebisa ukuba ufumane ibhegi yesikhumba.
Ibhegi yesikhumba sele ikhona ixesha elide. Nangona kunjalo, olu hlobo lwengxowa ye-duffle iya isanda kwaye ithandwa ngakumbi. Kuthetha ubuhle, ubhetyebhetye, okwangoku, ubucukubhede kunye nobuntu.
Ukuba ufuna ukuba nobunzima bokukhanya, into ephathekayo kunye nefashoni yebhegi ye-duffel, sicebisa ukuba uthenge i-nylon okanye i-polyester bag. Izinto ezinokuthintela ukungena kwamanzi ezinokukunceda ukwahlula indawo eyomileyo kunye nendawo emanzi. Ukuba ufuna ukubeka iimpahla ezimanzi, izihlangu okanye itawuli, lukhetho olufanelekileyo. Ngokubanzi, ibhegi yesikhumba ye-duffel kunye nengxowa ye-nylon duffle inokusetyenziswa njengebhegi ehambelanayo yokuhamba ngenqwelomoya, kodwa ndicinga ukuba, i-nylon duffle ibhegi ephathekayo ilungele ngakumbi abasetyhini, kuba iyifashoni, iyabutofotofo kwaye yeyala maxesha.
Kungakhathaliseki ukuba iingxowa ze-duffle zesikhumba okanye i-nylon duffle bag, zisetyenziswa ngokubanzi. Ukuzivocavoca kwezemidlalo liqabane elithembekileyo elifanelekileyo kwimidlalo yangaphakathi nangaphandle. Ingxowa enkulu yamagxa yokuzilolonga, ukuhamba, imisebenzi yezemidlalo, intenetya, ibasketball, iyoga, ukuloba, ukuzingela, ukukhempisha, ukuhamba intaba kunye nemisebenzi emininzi yangaphandle.
Kulula kakhulu ukucoca ibhegi ye-duffel. Kwingxowa yokufaka isikhumba, kufuneka usule izinto ezimdaka. Isingxobo se-nylon duffle sinokuhlanjwa. Ukuba unohambo olude, ndicinga ukuba i-duffle yesikhumba ilungile kuwe. Ukuba uthatha umthambo nje, ibhegi yenayiloni yanele wena.